३० चैत, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पारिवारिक शोकमा परेका छन् । उनको माइला भाइ गोविन्दराज पौडेलको ७५ वर्षको उमेर आज चितवनको रत्न नगरस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो ।
व्यास नगरपालिकाको २९ औं पदस्थापन दिवसको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल भाइको निधनको खबर पाएलगत्तै चितवन गएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइको निधनले आफु एक्लो भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘नाताले भाइ भए पनि मेरो साथी जस्तै गरी सबै कुरामा साथ सहयोग पाउँदै आएको थिए । राजनीतिक जीवनकालमा सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भाइको निधनबाट मैले आफूलाई एक्लो महसुस गरेको छु”, नेता पौडेलले शोक सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलको निधनप्रति नेपाली काँग्रेस तनहुँले दुःख व्यक्त गरेको छ । पार्टीका जिल्ला सभापति बैकुण्ठ न्यौपानेले असल अभिभावक गुमाउनुपर्दा पार्टी र समाजलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । स्व.पौडेलका श्रीमती बन्दना, छोरा अनिल तथा छोरीद्वय शान्ता हुमागाईं र कान्ता हुमागाईं रहेका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन्छ : डा. महत
प्रदेश २ : कोरोना संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु, ४३ संक्रमित थपिए
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण ९ प्रतिशत सकियो, २४ सै घण्टा यसरी हुन्छ काम !
राजधानीलाई मात्र विकसित ठान्ने सोच अन्त्य गर्न जरुरी : मन्त्री श्रेष्ठ
ओलीले बोलाए एमाले स्थायी समिति बैठक
कोरोना संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ३०० पुग्यो